Fizarana amin'ny iPhone marina
Ao amin'ny Actualidad iPhone dia afaka mahita ianao misy karazana fampahalalana mifandraika tsy an'i Apple ihany fa miaraka amin'ireo mpifaninana aminy ihany koa. Amin'ny alàlan'ny fizarana samihafa dia azonao atao ny mahita ny vahaolana amin'izany olana atolotry ny iPhone anao, ny rindranasa ilainao hanovana ny sarinao, ny fanangonana ny lalao na fampiharana tsara indrindra….
Ho fanampin'izany, azonao atao koa ny mampahafantatra ny vaovao rehetra, ireo roa ireo fitaovana paoma samy hafa ary koa ny serivisy apetrany eo am-pelatanantsika, tsy manadino ny fampitahana amin'ireo terminal be solontena indrindra amin'ny tsenan'ny telefaona Android.
Eny na izany aza, tsy hitanao ny vahaolana amin'ny olanao, azonao atao ny mifandray amin'ny sasany amin'ireo Mpanonta iPhone News, mba hanampianay anao araka izay tratranay.
Fampianarana sy torolàlana